Home Wararka Dagaal Baraawe ku dhexmaray ciidanka dowlada iyo Al Shabaab
Dagaal Baraawe ku dhexmaray ciidanka dowlada iyo Al Shabaab
Dagaal u dhaxeeya Ciidamada Xoogga Dalka & Al-Shabaab ayaa ka dhacay Degmada Baraawe Gobolka Shabeelaha Hoose ahna xarunta DG Koofur Galbeed, dagaalka ayaa yimid kaddib markii Al-Shabaab weerartay saldhigyo ciidanka Xoogga ay ku leeyihiin Garoonka Diyaaradaha Degmadaas.
Ilo deegaanka ah ayaa Mustaqbal u sheegay in dagaalka uu socday muddo kooban, Ciidamada Xoogga ayaa saldhigyo waa weyn ku leh agagaarka Garoonka Diyaaradaha Degmada Baraawe waxaana ay ka ilaaliyaan nabadgalyada Garoonka.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Gen. Odowaa Yuusuf Raage oo la hadlay Warbaahinta Dowladda ayaa sheegay in khasaare dhimasho & dhaawac dagaalkaas lagu gaarsiiyay Al-Shabaab balse dhankooda ma sheegin waxyeellada gaartay.
Gen. Odowaa ayaa tilmaamay in ciidamada Xoogga Dalka ay kahortageen duullaan Al-Shabaab ku damacsaneed “In ay ku qalqalgeliso Doorashada lagu wado in ay ka dhacdo Degmada Baraawe” sida uu hadalka u dhigay.
Sarkaal katirsan Dowladda Federaalka ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada Xoogga ay dileen 5 xubnood oo katirsan Al-Shabaab, halka dhaawaca uu intaas ka badan yahay, Ciidanka ayaa ku dhawaaqay howlgallo baaris ah.
Al-Shabaab ma jiro war kasoo baxay oo ay uga hadleyso dagaalka ka dhacay Degmada Baraawe ee Gobolka Shabeelaha Hoose, Guulaha Dowladda Federaalka ay ka sheegatay iyo khasaaraha ka dhashay iska hor imaadkaas.